६ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले गरे लाभांश प्रस्ताव : प्राइम र गुराँस लाईफले मंसिर महीनामै पारित गर्दै
मंसिर ५, काठमाडौं । सूचीकृत कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहँदा हालसम्म ६ ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् ।
एशियन लाईफ, रिलायन्स लाईफ, प्राइम लाईफ, सूर्या लाईफ र गुराँस लाईफले लाभांश प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् । यी मध्ये गुराँस लाईफले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लाभांश सार्वजनिक गरेको हो भने बाँकी कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लाभांश सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमांकीय मूल्यांनका लागि भारतनै जानुपर्ने हालसम्मको बाध्यात्मक अवस्था र सो पश्चात मात्र लाभांश प्रस्ताव गर्न सकिने भएकाले एक वर्ष पुरानो लाभांश अहिले सार्वजनिक भइरहेको हो ।
गुराँस लाईफले पनि सोही कारण गत वर्षनै पारित गर्नुपर्ने लाभांश अहिले पारित गर्न लागेको छ । गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सले साउन २४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको ५ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव मंसिर १० गते वार्षिक साधारण सभा मार्फत पारित गर्दैछ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ८४ हजार छ । सोही पूँजीको आधारमा गुराँस लाईफले ५ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने रू. २ अर्ब बराबरको चुक्तापूँजी कायम गर्नेछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लाभांश सार्वजनिक गर्ने पाँच कम्पनीहरुमध्ये प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले मंसिर १९ गते साधारण सभा गर्दैछ । उक्त सभाबाट कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । हाल प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ४१ करोड ७० लाख ५७ हजार छ ।
यस वर्ष लाभांश सार्वजनिक गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुमा एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको कात्तिक ३० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १ करोड ७ लाख ६० हजारको आधारमा २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत २ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, यो वर्ष सूर्या लाईफले १२ दशमलव ७० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब २६ करोड २८ लाख ९४ हजार रहेको छ ।
हालसम्म लाभांश सार्वजनिक गर्ने ६ ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये दुई कम्पनी भने नयाँ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । रिलायन्स लाईफ र ज्योति लाईफले पनि लाभांश प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेका हुन् । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्र्ष ०७६÷७७ को मुनाफाबाट कुल १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको कात्तिक १४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. २ अर्र्ब २०ं करोडको आधारमा ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेतका लागि ५ दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
ज्योति लाईफले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेपश्चात पहिलो पटक लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । यस कम्पनीले सर्वसाधारणमा २०७७ साल फागुन २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म आईपीओ जारी गरी २०७७ साल चैत १३ गते बाँडफाँट गरेको थियो । त्यस्तै, रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट कर समेत ५ दशमलव २६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको असोज १८ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा ५ दशमलव २६ प्रतिशत करसमेत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले ५ प्रतिशत नगद लाभांश र सो कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २६ प्रतिशत रकम छुट्याएको जानकारी दिएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
स्रोत : कम्पनीद्वारा जारी सूचना